Khangisa ku Martech Zone | Martech Zone
Zonke izinkambu ziyadingeka!
Dala isikhangiso esisha
Ufuna ukukhombisa kuphi isikhangiso sakho?
Okufakiwe kuDeskithophu (1200px ububanzi ngo-280px ubude)Kufakwe kuselula (ububanzi obungu-336px ngobude obungu-280px)Kufakwe kuthebhulethi (ububanzi obungu-768px ngo-280px ubude)
Isihloko sesikhangiso (40)
Incazelo yesikhangiso (80)
I-URL yesikhangiso (255)
Isithonjana: png, jpg, gif
Lapho ufuna ukuqala ukubonisa isikhangiso?
Khetha imodeli yenkokhiso nokukhawulelwa komkhawulo
Ukubuka kuqala kwesikhangiso
Ukufinyelela kwanyanga zonke kwabaninimabhizinisi abangaphezulu kuka-50,000, abenza izinqumo, ochwepheshe bezentengiso, nabasebenza ngokuthengisa.
U-77.3% wezivakashi zethu ufika evela kwimiphumela yenjini yokusesha.
Kuhunyushwe (umshini) ngezilimi ezingaphezu kwezingu-100 nge-70% yesiNgisi.
Ababhalisile be-imeyili abasebenza nsuku zonke nangesonto lama-30,000.
Imithombo yezokuxhumana ehlanganisiwe elandelayo inabalandeli abangaphezu kuka-50,000 XNUMX.
Izivakashi zethu ziyacwaninga, zithola, futhi zifunde ubuchwepheshe bazo bokuthengisa nokuthengisa obulandelayo namasu ahambisanayo. Izibalo zibeka lezi njengezintshisekelo eziphezulu:
Izinsizakalo Zokukhangisa Nokumaketha
Isoftware yebhizinisi nokukhiqiza
Izinsizakalo ze-SEO & SEM
I-65 +: 4%
Martech Zone liphethwe futhi liqhutshwa ngu DK New Media, LLC, inkampani ye Douglas Karr. Uma ungathanda imibiko enemininingwane yezibalo, ngicela ungithinte.
Izigaba Zamanje Zokukhangisa
Isigaba esifakiwe - lesi yisigaba esiyinhloko ngqo ngezansi kwebha yethu yokuzulazula nesaziso futhi ikhona kuzo zonke izindatshana namakhasi amakhulu esayithi. Kukhona kokubili ideskithophu nenguqulo yeselula etholakalayo.
Udinga Uhlelo Olungokwezifiso?
Futhi singakudalela izinhlelo zangokwezifiso ngokuya ngedivayisi, izwe, isigaba, nebanga ledethi. Sicela unikeze imininingwane ethile ukuze sikwazi ukuxoxa ngalokhu nawe. Sicela UNGALisebenzisi leli fomu ukuthola imininingwane kokuthunyelwe okuxhasiwe noma izicelo ze-backlink. Isicelo sakho sizosuswa.